Utholakele "olahle" usana - Ilanga News
Home Izindaba Utholakele “olahle” usana
Utholakele “olahle” usana
Kuthiwa ubanjwe ethilileka ethekwini wabizelwa amaphoyisa
UMNU Skhumbuzo Budula nosana lwakhe obese
UBANJWE ethilileka enkabeni yeTheku unina wengane ILANGA lomhla ka-5-7 kwephezulu elabika ukuthi itholwe ngabazalwane ishiywe dengwane ebusuku erenki yamatekisi ngaseHostela laKwaMashu, osekuvela ukuthi wayilahla ngoba imphazamisa ekuhambeni izindlela zakhe zobusha.
Ngemuva kokuphuma kodaba lwale ngane kwi-LANGA, lwasabalala nasezinkundleni zokuxhumana, kufunwa umkhondo ngonina noma yizihlobo zayo, kugcine kutholakala uyise uMnu Skhumbuzo Budula.
Ekhuluma naleli phephandaba uMnu Budula, uthe kumthusile ukuzwa izindaba “zokulahlwa” kwengane yakhe.
“Kungethusile ukuthola ucingo ngoLwesibili ntambama kuthiwa mangibheke ezinkundleni zokuxhumana, kubonakala ingane yami. Kangifunanga nokubheka ngoba ngibonile ukuthi ngizolimaza abantu emgwaqweni njengoba ngisebenza njengomshayeli.
“Ngivukele emaphoyiseni aKwaMashu ngoLwesithathu, angihlanganisa nosonhlalakahle abagcine ingane,” kusho yena.
Uthi izihlobo zikanina wengane okuthiwa uneminyaka ewu-20, zithe zisola ukuthi waphazamiseka ngemuva kokudlula emhlabeni kukaninakhulu owamkhulisa ngemuva kokushonelwa ngunina.
UMnu Budula utshele ILANGA ukuthi lokhu kumenze wangafuna ukuvulela unina wengane yakhe icala ngakwenzile. Uthi ngoLwesithathu olwedlule ayehambe ngalo eyobona ingane, watshelwa ukuthi kungathatha izinyanga eziwu-6 ukuyithola, kwazise ngaleso sikhathi wayengakatholakali unina wayo.
Ngokusho kukaNkz Ntombenhle Shabalala owagcina esenakekela le ngane izinsuku ezimbili emuva kokuba yayitholwe ngumzalwane wesilisa abakhonza naye, wathintwa ngabesifazane abathi bambona unina wengane ngoLwesithathu emini ezama ukuyilahla edolobheni.
“Baxhumana nami ngabatshela ukuthi sinenkinga yokuthi unina wengane akatholakali, ngasengibekisa kubona ukuthi uma bephinde bembona bambambe, babize abomthetho. NgoLwesine ngizwe ngocingo lwabo bethi bayambona ethilileka kuBertha Mkhize Street (Victoria Street) eThekwini engayiphethe ingane,” kusho yena.
Uthi yena nomakhelwane wakhe, baqashe imoto baphuthuma lapho bafika amalungu omphakathi esembambile, wabizelwa amaphoyisa.
“Amaphoyisa asiyise esiteshini saKwaMashu lapho sasibike khona lolu daba. Athe yimi ongakwazi ukuvulela unina wengane icala, kodwa ngoba noyise wengane ubengafuni ukuvula icala nanokuthi ubeseveze ukuthi walahla ingane ngoba evakashele isoka lakhe lapha ehostela KwaMashu, ngisabile ukuzifaka endabeni engangithinti ngoba nalelo soka lakhe kangilazi nokuthi lingumuntu onjani,” kusho yena.
Uthi naye akuqaphelile wukuthi kubonakala sengathi unina wale ngane uphazamisekile engqondweni. “Uma ukhuluma naye akafuni ukukhuluma, kodwa ukuvezile ukuthi kuyamhlula ukukhulisa ingane ngoba iyamvimbela angakwazi ukuhamba izindlela zakhe futhi ubesaba ukutshela uyise wayo ukuthi makayithathe. Ubongile, wathi ujatshuliswa wukuthi ingane ngeke isaba wumthwalo wakhe,” esho.
Uthi ingane isagcinwe kosonhlalakahle ngoba kuvele ukuthi kwayena unina akanawo umazisi, kumele umndeni wakhe uyomshayela wona ukuze ezokwazi ukuyishayela isitifiketi sokuzalwa ngaphambi kokuba ithathwe nguMnu Budula.
“Uyise wengane uveze ukuthi uhlala emiqashweni eHambanathi ngenxa yomsebenzi, kodwa ingane uzoyithatha iyogadwa ngunina. Sibonga kakhulu kulaba besifazane abasilekelela bambona unina wengane ngoba ngabe namanje kasazi noma usenkingeni ngempela noma ingane wayeyilahle ngoba eqondile,” kusho uNkz Shabalala.
UMnu Mhlaba Memela okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uthe kubalulekile ukuthi lona wesifazane asheshe atholelwe usizo. “Sicela abomndeni wakhe bamyise emahhovisi ethu aseBridge City lapho ezothola khona usizo,” kusho uMnu Memela.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe kumele ngabe osonhlalakahle balivulile icala lokulahlwa kwengane uma uyise engathandi.
Previous articleUdliwe wabeka izaba umqeqeshi weBafana
Next articleKubhubhe umndeni (13) engozini